Big Car Tire Air Tester အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Big Car Tire Air Tester
ကားလေပေါင်ကို တိကျစွာ တိုင်းတာ နိုင်ပါမယ်။
အန္တရာယ် တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ကားမှန်ကို ခွဲဖို. အဘုလေး ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားမှန်ကို ခွဲဖို.၊ ကားလေပေါင် တိုင်းတာရန်
ဓာတ်မီးနဲ. တခြား အရေးပေါ်သုံး ပစ္စည်းများစွာလည်း
ကားရှိသူတိုင်း တစ်ယောက် တစ်ခု ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
အရေးပေါ်သုံး တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဈေးနှုန်း – 19000 kyats
အမည်: Big Car Tire Air Tester